(tonga teto avy amin'ny Repoblikan'i Madagasikara)
I Madagasikara dia nipoitra tamin'ny fiparitahan'ny kaontinanta Gondwana tamin'ny taona tamin'ny taona 35 tapitrisa tal. J.K.: voalohany i Madagasikara ary i India dia nisaraka tamin'i Afrika ary dimampolo tapitrisa taona taoriana, nisaraka tamin'i India i Madagasikara ary nitokana teo hatramin'izao fotoana izao. Noho izany dia tsy hita na aiza na aiza afatsy any Madagasikara ny valopolo isan-jaton'izay karazam-biby sy karazan-javatra misy any. Misy faritra ekôlôjika maromaro ao Madagasikara ary mihakely dia mihakely ireo faritra ekôlôjika noho ny asan'ny olombelona (tavy, fandringanana ny ala, fihazana ny biby) ; ankehitriny dimy amby sivifolo isan-jaton'ny ala taloha no voaringana.
Araka ny arkeôlôjia, ny olona voalohany indrindra tonga tao Madagasikara dia tonga teo amin'ny 300-500 taor. J.K. Ireo mponina ireo dia mponina aostrônezianina avy any Borneo, ao Indonesia. Tonga fitonjato taona taty aoriana ireo mponina Bantoa niampita ny lakandranon'i Môzambika, ireo arabo avy any avaratra, ireo karana ary ireo sinoa. Tamin'ny taonjato faha fito ambin'ny folo, nanomboka nanjanaka an'i Madagasikara ny frantsay (Fort-Dauphin, Diego-Suarez). Samy manana ny anjarany ao amin'ny fiainana ara-kolontsaina malagasy ankehitriny ireo mponina nipetraka ary mipetraka tao Madagasikara ireo.
Nandritra ny taonjato faha-19, ny nosin'i Madagasikara dia voazaky ny Fanjakan'i Madagasikara, niongana tamin'ny fanafihan'ny Frantsay tamin'ny 1895. Ny Governemanta malagasy voalohany dia tafapetraka tamin'ny 10 Oktobra 1958 ary tamin'ny 1960 no nambara ampahibemaso ny fahaleovantenan'i Madagasikara taorian'ny tolon'ny tia-tanindrazana. Madagasikara no anisan'ny firenena voalohany nahazo fahaleovantena tao amin'ny faritry ny Ranomasimbe Indianina ary anisan'ny voalohany indrindra tao amin'ny faritra atsimon'i Afrika.
9 Haikanton'i Madagasikara
Voalaza ara-tantara fa i Madagasikara dia isan'ny ilabolan-tanin'i Gondwana, ary nitriatra tamin'i Afrika 160 tapitrisa taona lasa izay. Nanomboka teo amin'io fivakisana io no niforona ny Nosin-tanin'i Madagasikara rehefa avy nisaraka tamin'ny India 80 na 100 tapitrisa taona lasa izay. Maro ny mpikaroka sy mpahay tantara no milaza fa teo ho eo amin'ny 200 taona T.J.K. (taorian'i Jesoa Kristy) no tonga teto Madagasikara ny olona mpifindra monina voalohany. Araka izany dia voalaza fa avy any Azia Atsinanana (Indonezia) no fiavian'ireo mpifindra monina ireo. Teo koa ny fahatongavan'ny Arabo avy amin'ny fianakavian'i Mohamady, ny Indianina ary ny Jiosy babo avy tany Babilôna. Ary teo koa (angamba) araka ny voalazan'ny mpandinika vitsivitsy ny fifindran'ireo Afrikanina izay mbola Arabo (Silamo) razana ihany koa. Ary taty aoriana no nisy olona avy any Tonga no tonga tao amin'ny nosy malagasy.
Mponina voalohany (-500–1500)[hanova | hanova ny fango]
Tsy tongalafatra ny zavatra fantatra mikasika ny fipetrahan'ny olona teto Madagasikara, fa araka ny karoka ary ny asa nataon'ireo mpahay jenetika, haitsikerafiteny ary tantara, dia aostrôneziana ny tena fiavian'ny Malagasy, izay avy amin'ny tambanosy indoneziana. Mety tonga teto Madagasikara ireo olona ireo tamin'ny alalan'ny lakana (waka) tamin'ny taonjato voalohany taor. J.K., na 300 taor. J.K., araka ny arkeôlôga, ary talohan'ilay daty farany voalaza araka ny lazain'ny jenetisianina. Ireo olona ireo dia antsoina Ntaolo, izay heverin'ny mpikaroka fa avy amin'ny fteny prôtô-malay-pôlinezianina *tau-ulu izay midika "olona voalohany", avy amin'i *tau 'olona" ary *ulu, izay midika "loha", "fiaviana", "fitombohana". Miantso an'ny tenany ho *va-waka" "olon'ny lakana" ireo mponina tonga teto Madagasikara voalohany ireo. "*va-waka" izay avy amin'ny teny *va "mponina" ary *waka "lakana"; teny izay heverina fa niavian'ny teny vahoaka.
Manazava ny endrika iraisan'ny Malagasy ny fiaviana aziatika tatsimo atsinanan'ny razambeny: tso-bolo, tsy mainty hoditra ohatra ny afrikanina banto. Ny vahoaka ntaolo" dia nampandova ny :
teny malagasy, izay teny iraisana manerana ny nosy; izay mizara fototeny maro amin'ireo teny Barito ary ny teny Dayak izay tenenina ao atsimon'ny Borneo toa ny fiteny ma'aniany izay teny be fitovizana indrindra amin'ny fiteny malagasy.
fomban-drazana iraisana amin'ny aostrônezianin'i Taiwan, nosin'i Pasifika, Indônezia, Filipina ary Zelandy Vao, toa ny fambolena saonjo, akondro, voaniho, fary; fampiasana zavamaneno toa ny sodina (malay suling) ny valiha, sns.
Vazimba ary Vezo[hanova | hanova ny fango]
Tonga avy amin'ny amorontsiraka atsimo atsinanan'ny nosy ny olona voalohany, na dia mety tonga avy tany Avaratra aza ny sasany. Tam-pahatongavana, nanao ny tavy no nahafahan'ny mponina voalohany namboly, tamin'ny alalan'ny fandringanana ny ala teny amin'ny amorontsiraka.
Tamin'ny taonjato faha-7 taor. J.K., dia nanomboka nanadio ny alan'ny afovoantany ny sasany amin'ireo vahoaka ntaolo ireo. Ireo tany malalaka vokatry ny fandringanana ny ala ireo dia nambolena vary sy saonjo. Ireo vahoaka ntaolo ireo izay nifidy ny nipetraka tanaty ala dia nantsoina hoe vazimba (teny avy amin'ny hoe *va-yimba izay avy amin'ny teny *yimba midika "ala"). Rafandrana, razamben'ny mpanjaka merina dia fantatra fa Vazimba. Rafohy ary Rangita izay mpanjaka merina dia fantatra fa Vazimba ihany koa.
I Madagasikara dia ivon-toeran'ny varotra miampita ranomasina izay mampifandray ny seranan-tsambo ao amin'ny Ranomasimbe Indiana tany am-piandohan'ny taonjato manaraka ny fitondran'olombelona. Ny tantaran'ny tantara nosoratana eto Madagasikara dia nanomboka tamin'ny Arabo, izay nametraka lahatsoratra ara-barotra teo amin'ny morontsiraka avaratra-andrefana tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-10 ary nampiditra ny finoana silamo, ny soratra arabo (nampiasaina hanoratra ny fiteny malagasy amin'ny endrika manoratra fantatra amin'ny hoe sorabe), ny astrôlôjia arabo, ary ireo singa ara-kolontsaina hafa. Nanomboka tamin'ny 1500 ny fifandraisana Eorôpeana, rehefa nahita ilay nosy ny kapiteny portogey atao hoe Diego Dias. Ireo tranombarotra frantsay dia iniorina tamin'ny morontsiraka atsinanana tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-17.
Nanomboka tamin'ny 1774 ka hatramin'ny 1824 dia nahazo laza teo amin'ny jiolahin-tsambo sy ny mpivarotra eorôpeana i Madagasikara, indrindra fa ireo mpandray anjara amin'ny varotra andevon'ny morontsirak'i Atlantika. Ny nosy kely ao Nosy Boraha, avy any avaratra-nosy avaratra atsinanan'i Madagasikara, dia navoakan'ny mpahay tantara sasany ho toa fitoeran'i Libertalia. Tantsambo Eorôpeana maro no nirodana teny amin'ny morontsiraky ny Nosy, anisan'izany i Robert Drury, ny diariny no iray amin'ireo sary vitsivitsy momba ny fiainana any atsimon'i Madagasikara nandritra ny taonjato faha-18. Ny harena nateraky ny varotra sambo dia nampitombo ny fiakaran'ny fanjakana niorina tao amin'ilay nosy, ny sasany tamin'ireo dia nihanatanjaka tamin'ny taonjato faha-17. Anisan'izany ny fikambanana Betsimisaraka any amin'ny morontsiraka atsinanana sy ny lehiben'ny Sakalava an'ny Menabe sy Boina any amin'ny morontsiraka andrefana. Ny fanjakan'Imerina, izay miorina any afovoan-tany afovoany sy ny renivohiny ao amin'ny lapa-mpanjaka ao Antananarivo, dia niitatra tamin'ny fitarihan'ny mpanjaka Andriamanelo.
Fanjakan'i Madagasikara[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-17 dia ny fanjakan'i Imerina dia fanjakana tsy natanjaka raha noharina tamin'ireo fanjakana amoron-dranomasina lehibe kokoa ary mbola lasa kely kokoa ny fahatanjahany tamin'ny taonjato faha-18, nandritra ny fanjakan' Imerina efa-toko. Taorian'ny ady sy ny mosary nandritra ny taonjato maromaro, dia tafaverina indray i Imerina tamin'ny 1793, mpanjaka Andrianampoinimerina (1787-1810). Avy amin'ny renivohiny voalohany Ambohimanga, ary taty aoriana avy amin'ny Rovan'Antananarivo, io mpanjaka merina io dia nanitatra haingana ny fitondrany tamin'ireo tanin'andriana mifanolo-bodirindrina. Ny tanjony dia hifehy ny nosy iray manontolo. Ny zanany nandimby azy, mpanjaka Radama I (1810-28), no nahavita izany. Izy no neken'ny governemanta britanika ho mpanjakan'i Madagasikara. Namarana fifanekena i Radama tamin'ny 1817 niaraka tamin'ny governoran'i Britanika ao Maorisy mba hanafoanana ny fivarotana andevo mendri-kaja ho an'ny miaramila britanika sy ny fanampiana ara-bola. Nanomboka tonga tamin'ny tona 1818 ny misionera anglisy avy amin'ny London Missionary Society; anisan'ireo olona ireo i James Cameron, David Jones ary David Griffirths izay nanangana sekoly, nametraka ny fanoratana teny malagasy tamin'ny alalan'ny abidy latina ary nandika ny baiboly, ary koa nampiditra karazana teknôlôjia vaovao teto amin'ny nosy Madagasikara.
Ny mpandimby an-dRadama, Ranavalona I (1828-61), mpanjakavavy, dia naneho hevitra momba ny fahamendrehana ara-politika sy ara-kolotsain'i Britaina sy Frantsa miaraka amin'ny didy amam-pitsipika izay nandrara ny fampiharana ny kristianisma eto Madagasikara ary namporisika ny ankamaroan'ny vahiny handao ny nosy. Ireo mponina eto Madagasikara dia afaka niampanga ny heloka isan-karazany toy ny halatra, ny fanarahana ny fivavahana kristiana ary indrindra ny famosaviana, izay voasazy amin'ny fihinanana tangena. Teo anelanelan'ny taona 1828 sy 1861, dia nahafaty olona 3000 teo ho eo isan-taona ny fandaràn'i tangena. Anisan'ireo nanohy niaina tao Imerina i Jean Laborde, mpandraharaha iray izay nanamboatra basy sy nanorina orinasa hafa tamin'ny anaran'ny fitondram-panjaka, ary Joseph-François Lambert, mpiantoka frantsay sy mpivarotra andevo niaraka tamin'i Printsy Radama II. dia nanao sonia fifanarahana fifaneraserana fantatra amin'ny anarana hoe Charte Lambert. Radama II (1861-63) dia nanandrana ny hamaha ny politikam-piarahamonin'ny mpanjakavavy, saingy roa taona taty aoriana dia noroahin'ny Praiministra Rainivoninahitriniony (1852-1865) sy ny fifanarahana amin'i Andriana sy ny Hova, izay nanandrana namarana ilay fahefana feno an'ny mpanjaka.
Taorian'ny fanandramam-panonganana dia nomen'ireo tandapa fahafahana manjaka i Rasoherina (1863-1868) vadin-dRadama, raha manaiky fizaram-pahefana amin'ny Praiminisitra izy. Izany fifanarahana ara-piarahamonina izany dia ho tanteraka amin'ny alalan'ny fanambadiana manana endrika politika. Nanaiky ny mpanjakavavy Rasoherina ka nanambady an'i Rainivoninahitriniony, ary taorian'ny fanonganana azy dia nanambady ny rahalahiny Rainilaiarivony (1864-1895), izay hanambady an-Ranavalona II (1868-1883) sy an-dRanavalona III (1883-1897). Nandridra ny iraika amby telopolo taona naha praiminisitra an'i Rainilaiarivony dia maro ireo lalàna noraisina hankaherezana ny fahefan'ny governemanta ary hanavao ny fitondrana ho maoderina kokoa. Natsangana manerana ny nosy ny sekoly ary natao ho voatery ny fidirana amin'izy ireo. Nohatsaraina ny fitantanana tafika ary noraisina ho mpanolotsaina ireo mpanorohevitra britanika hankahery ary hampahamatihanina ny miaramila. . Voarara ny fananana vady maro satria noraisina ho finoana ofisialy ny kristianisma nanomboka tamin'ny taona 1869 miaraka amin'ny finoana nentin-drazan'ny vahoaka tsy mitsaha-mitombo. Novaina hitovitovy endrika amin'ny Lalàna Iraisana britanika ny rafi-dalàna ary nampitovizana endrika amin'ny any Eorôpa ny fiainana an-dapa an-drenivohitra.
Fanjanahan-tany (1896-1958)[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny voalohany indrindra, noho ny tsy fanajana ny Charte Lambert, dia nanafika an'i Madagasikara i Frantsa tamin'ny taona 1883, izay nanjary fantatra tamin'ny anarana hoe ady Hova-Frantsay voalohany. Tany amin'ny faran'ny ady dia namela ny tanànan'Antsiranana (Diego Suarez) ho an'i Frantsa i Madagasikara ary nandoa vola 560.000 francs ho an'ireo mpandova an'i Lambert. Tamin'ny taona 1890, ny Anglisy dia nanaiky ny fananganana protectorat frantsay eo amin'ny Nosy, saingy tsy neken'ny governemantan'i Madagasikara ny fahefana Frantsay. Mba hanerena ny fieken-ko resy, ny Frantsay dia nanafika ny seranan-tsambon'i Toamasina teo amin'ny morontsiraka atsinanana, sy Mahajanga any amin'ny morontsiraka andrefana, tamin'ny Desambra 1894 sy Janoary 1895.
Repoblikan'i Madagasikara[hanova | hanova ny fango]
Ny lazan'ny Ratsiraka tamin'ny taona 1980 dia nahitana krizy tamin'ny 1991 raha nitifitra ireo mpanao hetsi-panoherana nandritra ny famoriam-bahoaka ny mpiambina ny filoha. Tao anatin'ny roa volana dia nisy governemanta tetezamita napetraka teo ambany fitarihan'i Albert Zafy (1993-96), izay nandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 1992 ary nanokatra ny Repoblika fahatelo (1992-2010). Ny lalàm-panorenana vaovao eto Madagasikara dia nametraka demokrasia maro antoko am-pelatanan'ny Antenimieram-pirenena. Ny lalàm-panorenana vaovao koa dia nanamafy ny fahalalahan'ny zon'olombelona, ​​sosialy sy politika, ary ny varotra malalaka. Na izany aza, dia niharatsy ny fihenan'ny toekarena tamin'ny andro naha filoha an'i Zafy, nisondrotra ny kolikoly, ary ny fampidirana ny lalàna mba hanomezana azy fahefana matanjaka kokoa. Nolavina tamin'ny 1996 izy, ary notendrena ho filohan'ny tetezamita i Norbert Ratsirahonana, nandritra ny telo volana talohan'ny fifidianana ho filoham-pirenena manaraka. Ratsiraka dia nofidina indray tamin'ny fahefana teo amin'ny sehatry ny fanavakavahana sy ny fanavaozana ara-toekarena nandritra ny fe-potoana faharoa izay naharitra hatramin'ny 1996 ka hatramin'ny 2001.
Ny mpitarika ny mpanohitra sy ny ben'ny tanànan'Antananarivo, Andry Rajoelina, dia nitarika hetsika tamin'ny voalohandohan'ny taona 2009 izay nanosika an-dRavalomanana tsy handresy tamin'ny fomba tsy araka ny lalàm-panorenana izay nomelohina ho fanonganam-panjakana. Tamin'ny volana Martsa 2009, dia notendren'ny Fitsarana Ambony ho Filoha Avon'ny Tetezamita i Andry Rajoelina. Tamin'ny taona 2010, dia nisy lalàm-panorenana vaovao noraisina tamin'ny fitsapan-kevi-bahoaka, nametrahana ny Repoblika fahefatra, izay nanohana ny rafitra maro antoko izay napetraka tamin'ny lalàm-panorenana teo aloha. Notendrena ho filoha i Hery Rajaonarimampianina tain'ny fandreseny ny fifidianana ho filoham-pirenena 2013, izay heverina ho marina sy mangarahara araka ny hevitry ny fiarahamonina iraisam-pirenena
I Madagasikara dia repoblika ahitana antoko politika miisa 312. Ny filoha no mitondra ny firenena ary ny praiminisitra no mitondra ny governemanta. Ny governemanta no mampihatra ny lalàna. Neken’ny mpandatsa-bato malagasy ny lalàm-panorenana novaina tamin’ny 1998.
Ireo fanjakana naorin’ny foko toa ny Sakalava, ny Merina ary ny foko hafa no manorona ny tafika voalohany tao Madagasikara. Nampiasa lefona izy ireo fa taty aoriana dia nampiasa basilava, tafondro ary fitaovam-piadiana mampiasa vanja hafa. Tany am-piandohan’ny taonjato faha-19 dia saika nanjaka eraky ny nosy ny mpanjaka Merin’ny Fanjakan’i Madagasikara, tamin’ny alalan’ny tafika ahitana olona telo alina tsara ofana ary tsara fitaovana. Nahatonga an’ny priminisitra Rainilaiarivony hangataka fanampiana amin’ny Britanika momba ny fiofanana ny tafika Merina ny fanafihan’ny frantsay ny tanàna eo amin’ny amorontsiraka. Na dia nisy aza ny fiofanana sy ny fahaizana nentin’ny britanika, nilefitra noho ny fanafihan’ny tranon’ny mpanjaka tao Antananarivo ny tafika malagasy. Lasa zanatany frantsay i Madagasikara nanomboka tamin’ny 1897 hatramin’ny taona 1960.
Luis Miguel Sanchez Cerro no anarany ary gasy firazanana izy kanefa nanongam-panjakana ka lasa filoham-pirenena tany Pérou tany Amerika Atsimo tamin’ny 27 aogositra 1930 hatramin’ny 1er martsa 1931. Lany tamin’ny fifidianana filoham-pirenena indray izy ny 8 desambra 1931 rehefa nifanandrina tamin’ny kandidà telo hafa, ka nitondra an’i Pérou hatramin’ny 30 aprily 1933, andro nahafatesany. Marihina moa fa nisy nitifitra izy tamin’io andro io, teo amin’ny faha-43 taonany, ka voatery niova filoham-pirenena i Pérou na dia tsy tapitra aza ny fe-potoana natokana hiasàn-dRasanchez Cerro.
Notsongoin’olom-bolo sy mamy hoditra tamin’ny vahoaka tokoa izy fony fahavelony noho izy malagasy firazanana. Any Però tokoa mantsy dia misy faritany antsoina hoe Piura izay fonenan’ireo Mangaches na Malagasy namidy sy nalefa niasa tany Amerika Atsimo. Marihina fa ny anaran’ny tompony (ny olona nividy azy) no iantsoana ireo Mangaches ireo, izany hoe na dia gasy aza ity lehilahy ity dia very ny anarana maha-gasy azy satria ireo ray aman-dreniny dia efa nitondra ny anaran’ny tompony ka nampita izany tamin’ny zanany.
Ao amin’ny faritra avaratr’io Piura io no ahitàna an’ilay tanàna atao hoe La Mangacheria izay nahaterahan’i Sanchez Cerro. Any koa dia misy saha iray antsoina hoe « Hacienda Malakasy » izay fonenan’ireo Malagasy fahagola. Ankehitriny kosa, na dia mbola maro aza ny Mangaches nahatazona ny volo-koditra maha-malagasy azy, dia efa nifangaro tamin’ny mponina any an-toerana ny ankamaroany ka nizara ny kolotsainy tamin’izy ireo. Anisan’ny vokatr’izany kolotsaina mifangaro izany ny mozika Tondero.
Ny teny malagasy dia misokajy ao anatin'ny fiteny aostrônezianina, iray tarika amin'ny fiteny malayo-pôlinezianina miaraka amin'ny fiteny tagalôga (fiteny filipina) ny fiteny malay-indônezianina, ny fiteny javaney sns.
Araka ny lalam-panorenana, ny fiteny malagasy dia fiteny ofisialy voalohan'i Madagasikara. Teny iray tsy mivaky sady azon'ny vahoaka malagasy manerana ny Nosy ny fiteny malagasy ofisialy. Araka ny statistika, ny teny malagasy ofisialy sy ireo tenim-paritr'i Madagasikara no tena hain'ny mponina malagasy tenenina. Eo amin'ny valopolo isan-jaton'ny (80%) Malagasy monina eto Madagasikara no tsy mahay teny afa-tsy teny malagasy. Ireo olona tsy mahay afa-tsy teny malagasy ireo amin'ny ankapobeny dia olona miaina any ambanivohitra. Amin'ny resaka haino aman-jery dia io fiteny io no teny voalohany ampiasaina eto Madagasikara. Tsy dia misy amin'ny teny malagasy loatra ny Aterineto, izay ahitana loharanom-pahalalana kely dia kely raha oharina amin'ireo fiteny eorôpeana lehibe (frantsay, anglisy...). Ny antony dia ny tsy fahitana na ny havitsin'ireo mpamatsy tranonkala amin'ny teny malagasy, ary ny havitsian'ny tahan'ny olona manana Aterineto amin'ny isa-mponin'i Madagasikara.
Noho izany dia nisy fiantraikany koa ny teny frantsay teo amin'ny voambolan'ny fandraharahana (sendikà, politika, distrika, sns) ary koa amin'ny lafin'ny haianarantany ao Madagasikara, ka na dia nogasiana aza ny ankamaroan'ny anaran-tany sy ny anaran-tanàna eto Madagasikara, dia mbola ampiasain'ny olona sasany (indrindra indrindra ireo avara-pianarana izay nianatra teny amin'ny sekoly miteny frantsay) ny anarana frantsain'ny tanàn-dehibe toa an'i Toamasina (Tamatave), Mahajanga (Majunga), Antsiranana (Diego-Suarez)...
Ny fiteny vahiny ianarana indrindra eto Madagasikara dia ny fiteny frantsay. Io, ary io ihany, no fiteny ampiasaina amin'ny fianarana ambony ary amin'ny fianarana frantsay eto Madagasikara. Izy io ihany koa no teny ampiasain'ireo mpamoaka lalàna. Nanomboka ny taona 1896 izay daty nivadihan'i Madagasikara ho zanatany frantsay, ny fiteny frantsay no fiteny ofisialy ary ampiasaina amin'ny lafiny fandraharahana ary saika mitovy lanja amin'ny teny malagasy izy io amin'ny fiainana politika.
Manaraka ny fiteny frantsay dia tonga ny fiteny anglisy. Ny antony ianarana ny teny anglisy ao am-pianarana amin'izao fotoana izao dia noho ny fianjadiana eran-tanin'ireo firenena miteny anglisy toa an'i Etazonia ary ny Firenena Mitambatra. Ankoatr'ireo firenena roa ireo dia ahitana ireo firenena avy ao Faritra Atsimon'i Afrika sy Afrika Atsinanana, (afatsy i Mozambika), ireo firenena any Azia Atsimo ary Azia Atsimo Atsinanana (Indonezia, Tailandy), ary i Aostralia. Heverina koa fa ny teny anglisy no teny fampiasa amin'ny varotra iraisam-pirenena ary amin'ny siansa ary ny raharahan'ny teknôlôjia vaovao.
Tsy fitenin'ny mpanjanatany ny teny anglisy ka tsy mira amin'ny teny frantsay ny lanjany sy ny fianjadiany. Kanefa noho ny fitiavan'ny filoha taloha Marc Ravalomanana ny fiteny anglisy sy noho ny fianjadiana eran-tanin'ny firenena toa i Etazonia, ny fianjadiana ara-paritr'ireo firenen'i Afrika sy ny firenena lehiben'ny Ranomasimbe Indianina ary koa ny fiparitahan'io fiteny io eran'izao tontolo izao, dia nataony ho teny ofisialy ny teny anglisy tamin'ny taona 2007 miaraka amin'ny teny frantsay sy ny teny malagasy ary lany tamin'ny fitsapahan-kevi-bahoaka. Tamin'izany taona izany, latsaky ny 5% no lanjan'isan'ireo malagasy afaka mifandray amin'io fiteny io. Tamin'ny nahatongavan'i Andry Rajoelina teo amin'ny fahefàna, dia nesorina tsy ho teny ofisialy intsony ny teny anglisy.
Nizara ho faritany enina i Madagasikara hatramin'izay: Antsiranana, Antananarivo, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina ary Toliara. Araka ny fiovana nisy anefa, nanomboka ny taona 2004, dia nozaraina ho faritra 22 i Madagasikara. Ireto avy ireo faritra 22 ireo miaraka amin'ny isan'ny mponina tamin'ny 2004:
4 Analamanga Antananarivo-Renivohitra 2 811 500 16 911 166 3
21 Androy Ambovombe Androy 476 600 19 317 24,7
3 005 188
3 173 077
1 247 663
1 239 783 1 140 301 1 171 773 1 204 006
261 914 263 405 270 675
737 430 757 714
1 105 841
1 136 260
1 042 272
1 119 083
1 181 603
1 759 321
1 618 277
1 662 941
1 271 121
Ny mponina malagasy mipetraka eo anivon-tany sy eny amin'ny morontsiraka atsinanana dia mety avy any Azia, ary ny mponina mipetraka any avaratra dia mety avy any India na avy any Afrika Avaratra. Araka ny dinika natao vao haingana, mety tsy nisy olona nipetraka teto Madagasikara raha tsy tany amin'ny taonjato faha-10 tany ho any. Teo ny Aostrôneziana (avy any Indônezia) no mety tonga. Ankehitriny dia misy mponina malagasy mipetraka any amin'ny tamba-nosin'i Kômôro (Moheli, Mayotte, Anjouan) sy any La Réunion.
Ny isan'ny mponina eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia 20 042 551 tamin'ny 2008, ary eo amin'ny 22 tapitrisa eo ho eo tamin'ny 2012. Eo amin'ny 43%n'ny mponin'i Madagasikara no latsaky ny 15 taona.
1921–1960[hanova | hanova ny fango]
1950—2010 [hanova | hanova ny fango]
Betsaka ireo olon-dehibe izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Latsaky ny tahan'ny lehilahy mahay mamaky teny sy manoratra ny tahan'ny vehivavy mahay mahay mamaky teny sy manoratra. Eo amin'ny 16,4% ny vola lanin'ny governemanta nandritry ny fe-potoana 2000-2007. Nifintina 32% ny anjaran'ny kitapom-bola ho an'ny fianarana ambony tamin'ny fiantombohan'ny taona 1990. Eo amin'ny 57$ (6% ny PIB/olona) isaky ny mpianatra ny vola lanin'ny fanjakana amin'ny fampianarana ambaratonga voalohany.
Any ila-bolan-tany atsimo no misy an'i Madagasikara, faha-efatra amin'ny nosy ngeza indrindra eto an-tany ny nosin'i Madagasikara, ao aorian'i Groenland, Ginea Vao ary Borneo. Ny lakandranon'i Mozambika no manasaraka azy amin'i Afrika. 700 km eo ho eo ny elanelan'i Mozambika sy Madagasikara. "Nosy Mena" (l'Île Rouge) no fiantson'ny olona an'i Madagasikara tsindraindray, satria ilay loko mena ilay no tanimena mandoko ny dongolavany mena. 1580 km ny halavan'i nosin'i Madagasikara avy any atsimo ka hatrany avaratra ary 580 km ny sakany avy any atsinanana ka hatrany andrefana.
Misy tangorom-bohitra mizara ny nosy makany avaratra hatrany atsimo. Ny salasalan'ny halavan'ireo tendrombohitra ireo dia misy 1200-1500 metatra eo ho eo. Any avaratr'i Madagasikara no misy ny Tendrona Tsaratanana (na Maromokotro) manana haabo 2876 m. Misy farihy dimy any; ny farihy ngeza indrindra any Madagasikara dia ny Farihin' Alaotra, manana velarana 182 km2
Voazara telo ny vohontanin'i Madagasikara. Any atsinanana dia misy lemaka tery kely haavo misy ny lakandranon'ny Pangalana manana toe-tany be orana any avaratra hatrany atsimo. Ny eo anivon-tany indray dia misy ny ankabeazan'ny mponin'i Madagasikara ary koa ny renivohi-pirenena Antananarivo ; ny toe-tany eo amin'ny faritra anivo dia mangatsiaka amin'ny andro ririnina ary matimaty na mafana rehefa andro fahavaratra amin'ny volana Desambra; ny rotsak'orana eo amin'ny faritra anivo dia antonontonony; ny havoana dia maka enimpolo isan-jaton'ny velarantanin'i Madagasikara. Ny faritra andrefana dia manana toe-tany maina sady mafana mandavantaona; ny hakitroky ny mponina any amin'ny faritra andrefana dia anisan'ny kely indrindra eto Madagasikara.
Ny toerana avo indrindra eto Madagasikara dia ny Tsaratanana any amin'ny faritanin'Antsiranana, izay manana haavo 2 876 metatra.
Tropikaly ny toe-tany amin'ny morontsiraka, ara-pehibe izy any atsinanana, tropikaly maina izy any amin'ny morontsiraka andrefana sy atsimo, ary tropikaly mangatsiaka izy any ampivoany. Ny Anticyclone ny Ranomasimbe Indianina no mampisy ny alizay atsimo atsinanana, mihisaka araky ny fizaran-taona io alizay io.
Manana fizaran-taona roa i Madagasikara: misy ririnina (maina) amin'ny volana Mey hatramin'ny volana Oktobra, sy fahavaratra (mando) amin'ny volana Novambra hatramin'ny volana Aprily. Miovaova arakaraky ny haabon-toerana ny toetrandro sy ny rivotra manjaka. Mandalo amin'ny morontsiraka atsinanana izao ohatra ny alizay, Noho izany dia manorana matetika ny any satria mbola misy an'Andringitra mitazona ny ankabeazan'ny hamandoana. Any amin'ny morontsiraka atsinanana izao no tena be orana indrindra any Madagasikara (3 500 mm isan-taona).
Olona vitsy an'isa no manana fidiram-bola isam-bolana avy any ivelany avy amin'ny havana. Tombanana ho eo amin'ny 50€ hatramin'ny 100€ isaky ny fianakaviana ny vola vahiny. Tamin'ny Mey 2003, ny Arary malagasy no misolo ny Franc Malagasy (iraimbilanja). Nanomboka tamin'izany dia fametahana mari-bidy roa no apetraka eo amin'ny toeram-pivarotana sy ny tsena ofisialy. Nanomboka tamin'ny taona 2005 dia tsy misy afa-tsy ny Ariary malagasy no sandam-bola ofisialy ao amin'ny firenena (1 Ariary = 5 iraimbilanja).
L'Express de Madagascar Gazety L'Express de Madagascar
L'Hebdo de Madagascar Gazety mpiseho isan-kerinandro
↑ Rio +20 : Madagascar vise à devenir le grenier de la région de l' Océan Indien
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Madagasikara&oldid=993846"
Voaova farany tamin'ny 30 Jiona 2020 amin'ny 11:56 ity pejy ity.